Indlela ukuphucula iintsapho ulwalamano? Like Mama sanelise ngakumbi, Mntwana kumnandi ngakumbi yaye Dady yonwabe ngakumbi? Kutheni ababambele ipati? Nceda ungakhathazeki, BVC kuya kukunceda ukugqiba yonke imisebenzi uhlambulukile. .
Wena ube elininzi nabahlobo kwaye ufuna kubamangalisa, kutheni abamangali ngokuthi iququzelele BBQ ipati? Musa ukuvumela indlu yakho mdaka ukufumana endleleni lokufumana ixesha zakho nabanye abahlobo abalungileyo. Apha sisicwangciso 5 inyathelo ukunceda ukucoca indlu yakho - akukho uxinezeleko, nje lula-to-ukufezekisa imisebenzi.
Ngoko ukuqala phi? Kuba BBQ iqela, iindwendwe ziza ndichitha ixesha labo ngaphandle, ngoko ke kwiindawo ezininzi kubalulekile ukucoca kuloo ndlu emnyango, igumbi, ikhitshi kunye lokuhlambela ophilileyo. Akukho mfuneko ukucoca yonke indlu kodwa kugxininisa indlela kweqela - ingqalelo abaninzi abantu baya kuba neetafile, ezishelifini kunye neendawo ukuseta iziselo zabo.
Lula, nje amanyathelo yayo 5:
1. Fresh & Declutter kwigumbi lakho.
Qala ngokubeka up phandle na indawo izinto, nezingqengqelo nokolula, ezintofontofo, kwentloko kunye refolding lilo (olukhulu ufihla naziphi na amabala - ke akuyi kuya kufuneka benze oku emva kokuba usebenzise nayiphi na imveliso BVC) . Okulandelayo ekucoceni itafile, TV screen kunye nezinye iindawo enothuli ngokusebenzisa ilaphu microfiber. Ekugqibeleni, utshayela phezulu nayiphi uthuli okanye isilwanyana iinwele emgangathweni, kwaye musa ukulibala ukucoca iibhodi yakho ezigudle usebenzisa ongenawo lakho ibrashi okanye umbhobho attachment.